Tag: fanentanana mailaka | Martech Zone
Tag: fanentanana mailaka
Talata, Martsa 13, 2018 Ian Cleary
Tsara ny varotra miditra. Mamorona atiny ianao. Mitondra fifamoivoizana mankany amin'ny tranokalanao ianao. Manova ny sasany amin'izany fifamoivoizana izany ianao ary mivarotra ny vokatrao sy ny serivisinao. Saingy… Ny zava-misy dia sarotra kokoa noho ny hatramin'izay ny fahazoana valiny Google pejy voalohany ary mitarika fivezivezena ara-organika. Ny varotra atiny dia lasa fifaninanana mahery. Mitohy ny fihenan'ny zava-bita voajanahary amin'ny fantsona media sosialy. Ka raha hitanao koa fa tsy ampy intsony ny varotra miditra dia mila izany ianao
Koa satria apetraky ny matihanina amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro isan'andro izahay dia mahita ny toerana tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny fizarana mailaka. Nozarainay talohan'izay ny fomba fanoratana feo mahomby ary ity infografika ity dia fanarahana tsara izay mandrakotra ny fandrosoana lehibe kokoa. Ny zava-misy dia mila manangana fahatsiarovan-tena sy fahefana amin'ny marika amin'ny Internet ireo orinasa. Tsy ampy intsony ny fanoratana atiny, ny fahaizana mametraka atiny lehibe sy fizarana azy dia